विदेशमा हुने अवार्डमा पैसाको चलखेल र मोजमस्ती हुने गरेको छ , – Ranga Darpan
विदेशमा हुने अवार्डमा पैसाको चलखेल र मोजमस्ती हुने गरेको छ ,
आज भोलि हुने अवार्ड निकै फितलो देखिन्छन अवार्ड दिँदा कर्म र क्षमताका आधारमा होइन बल्कि पैसामा अवार्ड बेच्ने गरिन्छ। बुधबार आयोजना भएको एक अवार्डको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम संचालक नरेश भट्टराइले सुरुवातमै पत्रकारलाई एउटा कुराको जानकारी गराए, नरेशले हङकङमा आयोजना हुन लागेको ‘एभरेष्ट इन्टरनेशनल फिल्म अवार्ड’मा सहभागी हुने चलचित्रकर्मीले कुनै पनि पैसा तिर्नुनपर्ने जानकारी गराए ।
तर, अहिले नेपाली चलचित्रको विदेशमा आयोजना हुने अवार्ड यति ध्वस्त भैसकेको छ कि, नरेशलाई पैसा लाग्दैन है भनेर जानकारी गराउन कर नै लाग्यो । अहिले विदेशमा आयोजना हुने अवार्ड वदनाम हुनुको मुख्यकारण नै पैसाको चलखेल हो ।
अवार्ड कसलाई दिने ? अवार्डका लागि को लायक छ ? भनेर आयोजकले सोच्न छाडेका छन् बरु कसले पैसा धेरै हाल्छ उसलाईनै सहभागी गराउने र सहाभागी गराउने प्रचलन बढेको छ यसले गर्दा यो छाप चलचित्रमा पछि सम्म पर्ने छाप हो र पछाडीकाले पनि यो गर्ने उनको दाबि छ।
धबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो बिषयमा चलचित्र क्षेत्रका दुई चर्चित संस्थाका प्रमुखहरुले कुरा उठाएका थिए । चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदयले भने–‘पैसा दिएर अवार्डमा सहभागी हुने बिषयमा चलचित्रकर्मी नै सजग हुनुपर्छ । हामी आफैले पैसा नदिने हो भने त्यस्ता अवार्ड विस्तारै किनारा लाग्दै जान्छन् ।
विदेश घुम्न पाइने र अवार्डको लोभमा आयोजकले जती भन्यो त्यती नै पैसा तिरेर जाने अनी नेपाल आएपछि कुरा काट्ने प्रचलन बढेको छ । यसले अवार्डलाई बदनाम बनाएको हो ।’
यता, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीको भनाई पनि उदयको जस्तै थियो । विदेशमा अवार्ड आयोजना गर्दा त्यसले सिंगो चलचित्रको नै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले चलचित्रकर्मी पनि मर्यादित हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यसका लागि उनले आयोजकलाई सेड्यूल बनाएर कार्यक्रम गर्न आयोजकसँग आग्रह गरे । आकाशले भने–‘विदेशमा अवार्ड आयोजना हुँदा त्यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माथि उठाउन पर्छ, बदनाम गर्ने होइन । यसैले, बदनाम हुने गरी कसैले पनि काम गर्नु हुँदैन ।’
आकाशले यसो भनिरहँदा चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले आफ्नो तितो अनुभव सुनाए । उनले भने–‘अवार्डमा जाने कलाकर्मीलाई सेड्यूल बनाएर पनि केही नलाग्ने रहेछ । महंगो खर्च गरेर होटल बुक गर्यो, राती आधा कोठा त खाली नै हुन्छ । कलाकारका लागि एउटा सेड्यूल बनाइदियो, आयोजकलाई झनै हैरानी ।
नेपालबाट उडेपछि धेरै कलाकर्मी अब रम्ने समय यही नै बेला हो भन्ने सोच्न थाल्छन् । जसलेगर्दा, न त उनीहरु आयोजकको सेड्यूल अनुसार हिड्छन् न त नियममा नै । कलाकारले एउटा अवार्डमा सहभागी हुँदा सिंगो देशको नै प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् ।
तर, विदेशमा आयोजना हुने अवार्डका लागि पुग्ने चलचित्रकर्मीले नेपाली आकाशबाट उडेपछि यो कुरा चटक्कै विर्सिएको पाइन्छ । यसैले, कहिलेकाही कलाकारले सडकमै घिनलाग्दा हर्कत गरेको भिडियो सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदयले भने–‘मैले आजसम्म पैसा दिएर अवार्डमा सहभागी भएको छैन र पैसा लिएर अवार्ड पनि गरेको छैन । विदेशमा आयोजना हुने अवार्डले नेपाली चलचित्रको विदेशी बजार विस्तारमा ठूलो योगदान गरेका हुन्छन् । तर, ती अवार्डमा आफै जाने र अवार्ड पाइएन भने कुरा काट्दै हिड्ने प्रचलन हटाउनुपर्छ ।’
हुन पनि हो, अहिले अवार्डमा चलचित्रकर्मीको उपस्थिती साह्रै नै फितलो हुने गरेको छ । अहिले अवार्ड पाउँदाको गरिमा सकिदै गएको छ । अर्कोतिर, विदेशमा आयोजना हुने अवार्डमा सहभागी हुनका लागि पैसा तिर्नै पर्ने प्रथा बढ्न थालेपछि कलाकार विच्किन थालेका छन् । जसलेगर्दा, विदेशमा पुग्ने जम्बो टोलीमा चिनिएका अनुहार भन्दा घुम्न र रमाइलो गर्न जानेको संख्या बढेको छ ।
नेपाली चलचित्रको बजार विस्तारका लागि विदेशमा आयोजना हुने अवार्ड सबैभन्दा ठूलो हतियार हुन् । तर, यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि आयोजक, चलचित्रकर्मीले नै गम्भिर भएर नसोच्ने हो भने अवार्ड वितरण बदनाम हुन्छन्नै यो चलन भविष्य सम्म रहिरहने देखिन्छ।
साराअलिले बागी ३ नगर्ने ,
सार्वजानिक बिदा काटेर निर्माण भयो २०७६ सालको पात्रो ,
नयाँ बन्ने मन्त्रीलाई अध्यक्ष नेपालको निर्देशन : पार्टीको प्रतिष्ठा उच्च राखेर काम…
मेयर बालेन शाहले भने एक हप्ताभित्रै सिसडोललाई दुर्गन्धमुक्त बनाउँछौ
तारा एयर जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरको शव परिवारलाई बुझाइयो
पोखरा विमानस्थलमा तेलकाे ट्याङ्कर पल्टिएपछि उडान अवरुद्ध